कतै तपाईं खाली पेटमा यी ५ चीजको सेवन त गर्नुहुन्नँ ? यो सानो गल्तीको हानी बढी - Sawal Nepal
कतै तपाईं खाली पेटमा यी ५ चीजको सेवन त गर्नुहुन्नँ ? यो सानो गल्तीको हानी बढी
झापा सवाल नेपाल २०७७ मंसिर ४, ११:०८
तौल घटाउनका लागि धेरैजसो मानिसहरु डाइटको सहारा लिन्छन् । तर दिनको सुरुवातमा तपाईंले के खाइरहनुभएको छ, त्यसमा पनि तौल बढ्ने नबढ्ने कुरा निर्भर हुन्छ ।
केही खानेकुरा खाली पेटमा खाँदा तपाईंलाई जलन र एसिडिटीको समस्या हुनसक्छ । साथै, तपाईंको तौल कम गर्ने सपना पनि टुट्न सक्छ । आउनुहोस्, आज त्यस्ता खानेकुराबारे जानकारी लिऔं जुन खालीपेटमा कहिले पनि खानु हुँदैन ।
अमिलो फलफूल खाली पेटमा कहिले पनि खानुहुँदैन । यसो गर्दा शरीरमा अत्यधिक मात्रामा एसिड बन्न थाल्छ । फलमा फाइबर भरपुर मात्रामा हुन्छ त्यसैले यो खाली पेटमा खाँदा अतिरिक्त भार पर्नसक्छ । यसको साटो दिनको सुरुवात किशमिश वा भिजाएको बदाम खाएर गर्नुपर्छ ।
सोडा वा कुनै पनि सफ्ट ड्रिङ्क खाली पेट खानुहुँदैन । हुन त यी पेय पदार्थ स्वास्थ्यका लागि कहिले पनि सही होइनन् तर खाली पेटमा यो खाँदा यसको क्षती अझै बढी हुन्छ ।
खाली पेटमा यस्ता पेय पदार्थ पिउँदा ग्यासको समस्या हुन्छ । साथै यसले मोटोपना पनि बढाउँछ । यसको साटो खाली पेटमा कागती पानी पिउँदा तपाईंको तौल पनि घट्छ र स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पनि पर्छ ।
बिहान खाली पेटमा मसालेदार खाना खाँदा तपाईंको पेट पोल्न सक्छ । मसालेदार खाना खाँदा पेटमा एसिडिटी पनि बन्न थाल्छ । बिहानको खाना (ब्रेकफास्ट) सधैं हल्का र सादा हुनुपर्छ ।
चिसो पेय पदार्थः
दिनको सुरुवात कहिले पनि चिसो पेय पदार्थबाट गर्नु हुँदैन । कोल्ड कफी वा आइस टी जस्ता ड्रिङ्क पिउँदा तपाईंको पाचनक्रिया स्लो हुन्छ । यसको साटो मनतातो पानी, कागती वा अदुवाको चिया पिउनुहोस् । यी तीनै तत्वले मेटाबोलिजम बढाउनुका साथै तौल पनि कम गर्छ ।
तौल घटाउनका लागि धेरैजसो मानिसहरु हरियो सागसब्जी र सलादको सहारा लिन्छन् । यद्यपि, यी खानेकुरालाई काँचै वा खालीपेटमा खानुहुँदैन । यसले पाचन तन्त्र खराब हुनुका साथै, पेट दुख्ने र फूल्नेलगायतका समस्या देखिन्छन् ।
४ वर्ष अघिकाे अवस्थामा आइपुग्यो सेयर बजार, नेप्से १९ सय माथि